Niresaka tamin'i Ryan Mull aho ary nilaza izy fa nahatsikaritra ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po-per-click an'ny mpanjifany rehefa mampiditra horonan-tsary avo lenta amin'ny pejy fandraisana.
Ny vidiny ho an'ny horonantsary miorina amin'ny tranonkala mifangaro tsara dia mety miovaova amin'ny vidiny. Misy loharanom-pahalalana video vitsivitsy eo an-toerana izay afaka manao horonantsary latsaky ny $ 1,000 avy. Ny horonan-tsary matihanina bebe kokoa dia mety mitentina 2,500 $ no ho miakatra - fa raha mampitombo ny fiovam-po amin'ny 130% ianao dia tsy dia mila maka vola miverina amin'ny fampiasam-bola tsara!
14 Jiona 2010 à 9:01
Mampalahelo fa marina ny zavatra hitako.
Na ny habe, ny aspect ratio, ary ny fametrahana ao amin'ny tranokala dia misy fiovana… err, hoy aho
Azonao zaraina ve ny sasany amin'ireo 'loharano video eo an-toerana' lazainao? Mitady hanao horonan-tsary bebe kokoa aho izay tsy mahita mpivarotra mety.
Oay! Iza no namokatra ity video ity? Te hihaona amin'izy ireo aho. Misy afaka mampahafantatra ahy ve?
15 Jiona 2010 à 10:49
Eto Indianapolis, ny loharanon-dahatsary dia Imavex (http://www.imavex.com), Cantaloup (http://www.cantaloupe.tv), Famolavolana mangatsiatsiaka hafa
Stars Media (http://12starsmedia.com) eo an-toerana - samy manao asa tsara izy rehetra ary miovaova amin'ny vidiny sy ny vokatra.
Miasa amin'ny masoivohom-dahatsary mpanazava monina ao Toronto antsoina hoe LaunchSpark Video aho, ary hitanay fa tsy vitan'ny hoe nanampy tamin'ny fampitomboana ny varotra ho an'ny mpanjifanay ny horonan-tsary, fa natao ho fitaovana tsara ho an'ny paikadin'izy ireo amin'ny famokarana amin'ny ankapobeny. Maro amin'ireo mpanjifanay no nampiasa ny lahatsarin'izy ireo mpanazava tamin'ny seho ara-barotra sy ny famelabelarana, ary tamin'ny fanolorana ny mpihaino topimaso haingana momba ny vokatra/seriny, dia nahatonga ireo mpijery ireo ho mpitarika izany. Ny fahaiza-manao mora sy mahomby amin'ny fampiharana horonan-tsary amin'ny fantsona marobe dia zavatra iray hafa mahatonga azy io ho fitaovana ara-barotra lehibe!
21 Oktobra 2014 à 2:04
Horonantsary mahafinaritra, Fabio!